လက်ဝါးတံဆိပ် (hand brand) အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
လက်ဝါးတံဆိပ် (hand brand)
! တင်းတိပ် ၊ ပွေး ၊ ဝဲ ၊ ညှင်း ၊ တံတောင်ဆစ်မဲ
! ဒူးမဲ ၊ ပေါင်မဲ ၊ ဂျိုင်းမဲ ၊ ခြေမျက်စိမဲ
! အမာရွတ် ၊ အမဲစက်
! ယားနာအမျိုးမျိုး ၊ ဝဲနှင်းခူ
! အသားမာ၊ ကြွက်နုိ့ ၊ ဂျွတ်၊ ဒက် ၊များကိုပျောက်ကင်းစေပါတယ်
?ဂွမ်းစအနည်းငယ်ယူပြီး ခန္ဓာကိုယ်ဖြူချင်သည့်နေရာကိုဆေးရည်ဖြင့်ပွတ်လိမ်းပေးပါ (မကုတ်မဖဲ့ပါနှင့်/နဲနဲစပ်လို့ပါ)
အမည်: လက်ဝါးတံဆိပ် (hand brand)